नयाँ एप्पल वाच डिजाइन परिवर्तन बिना प्रस्तुत गरीएको छ म mac बाट छु
डिजाइन परिवर्तन बिना नयाँ एप्पल वाच पेश गर्दै
watchOS 8 खेलकुद मा केन्द्रित। विशेष गरी एक नयाँ एल्गोरिथ्म संग साइकल गर्न राम्रो ई-बाइक समर्थन गर्दछ। धेरै राम्रो खेल को लागी उपयुक्त छ र एप्पल वाच 7. को लागी धेरै नयाँ सुविधाहरु स्वतः स्टप प्रकार्यहरु संग।
नयाँ एप्पल वाच छ धेरै पतली, हल्का र ठूलो र अधिक luminosity संग। खेलकुद को लागी समर्पित तर दैनिक गतिविधिहरु को लागी कि हामी हरेक दिन गर्छौं। नयाँ इमोजीहरु को परिचय को संभावना संग सुधारिएको छ कि हामीलाई आउँने सन्देश को जवाफ दिने तरीका।
ठुलो पर्दा स्क्रिन मा अधिक सामग्री देखाउँछ र सीमाहरु छ कि देखाउँछ घडी पक्षहरु बाट अनुहार। नयाँ पर्दा पनि पाठ इनपुट को लागी एक पूर्ण किबोर्ड समर्थन गर्दछ।
नयाँ बलियो अगाडि गिलास संग IP6X प्रमाणीकरण धुलो, फोहोर र पानी को बिरुद्ध। त्यसैले तपाइँ यसलाई कहीं पनि लिन सक्नुहुन्छ।
एक सुधारिएको ब्याट्री संग यो १ hours घण्टा सम्म प्रदान गर्दछ र चार्ज गर्ने क्षमता धेरै सुधार गरीएको छ। त्यसैले अब निद्रा मापन गर्ने क्षमता सुधारिएको छ र अधिक प्रभावी ढंगले विकसित गर्न सकिन्छ।
चार्जि 33 ३३% छिटो गति, charging मिनेट चार्ज निद्रा ट्र्याकि of को अन्तिम hours घण्टा र ४५ मिनेट ० बाट %०% सम्म जानको लागी सुधार गरीएको छ। यो नयाँ चार्ज विधि USB-C को उपयोग गर्दछ र वर्तमान चुम्बकीय चार्ज डिस्क।
थप रूपमा, watchOS 8 परिचय हुनेछ workouts को समयमा स्वचालित साइकल पत्ता लगाउने को लागी समर्थन, साइकल चलाउने र ई-बाइक कसरत ट्र्याकि for को लागी अनुकूलित workouts को समयमा गिरावट पत्ता लगाउने।
यो पनि बनेको घडी हो १००% पुनर्नवीनीकरण एल्युमिनियम र नयाँ रंग संग।
एप्पल वाच श्रृंखला7उपलब्ध हुनेछ "यो पतन ढिलो" एप्पल को अनुसार, जसको मतलब त्यहाँ कुनै पनी रिलीज को सही मिति छैन, हाल को हप्ताहरुमा उत्पादन ढिलाइ को रिपोर्ट को पुष्टि। $ ३ 399 को एक शुरुवात मूल्य मा, श्रृंखला6को रूप मा उही मूल्य।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » डिजाइन परिवर्तन बिना नयाँ एप्पल वाच पेश गर्दै
आईफोन १३. A13 को लागी धेरै शक्तिशाली धन्यवाद
एप्पल नयाँ आईप्याड र आईप्याड मिनी पेश गर्दछ